Ingiriisiga loogu talagalay Qaxootiga, Asley, SIV, iyo Dhibanayaasha Ka-ganacsiga Tahriibinta - Machadka Waxbarashada Labada-Luqadood
Ingiriisiga loogu talagalay Qaxootiga, Asleyr, SIV, iyo Dhibanayaasha Ka ganacsiga dadka
Ku saabsan BEI RSS RSS
Fasallo aan Qiimaha lahayn oo Loogu Talagalay Ardayda U Qalma
Taageerada Luqadda (Isbaanish, Carabi, Faransiis, Farsi, Pashto, Sawahili, Turki)
Adeegyada Taageerada ee La Heli Karo
Caawinta Tixraaca ee Wada-hawlgalayaashayada
Qeybta Qaxootiga ee Qeybta Qaxootiga
Machadka Waxbarashada Labada Luqadood (BEI) wuxuu u adeegayay ardayda qaxootiga iyo soo-galootiga muddo 40 sano ah. Soddonkii sano ee la soo dhaafay, BEI waxa ay fasalo ESL ah siisay kumanaan muhaajiriin cusub ah, qaxooti, ​​magan-galyo-doon, dhibanayaal tahriibin, iyo booqdayaal ka yimid dibadda kuwaas oo matalaya dhammaan heerarka bulsho, waxbarasho, qowmiyadeed, iyo dhaqaale. BEI waxay siisaa ardaydeena waxbarid tayo leh, kuna dhiirigelisa inay ka gaadhaan tacliinta, ganacsiga, iyo bulshooyinka caalamka iyo kuwa maxaliga ah. Guulaha laga gaaray dhinacyadan waxay ku xoojiyaan ardaydeena xagga barashada luqadda waxayna u suurtagelisaa inay muujiyaan horumarrada awooddooda luqadeed. BEI waxay khibrad u leedahay baridda Ingiriisiga oo leh awoodo kala duwan: Farbarashada Aasaasiga ah, ESL, Barnaamijka Ingiriisiga Degdegga ah, U Diyaargarowga Shaqada, iyo Goobta Shaqada ESL oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn badbaadada iyo koorasyada hadalka iyo erayada la xiriira shaqada. Fasaladayada shaqada la xidhiidha waxay la shaqeeyeen noocyo badan oo warshado ah: adeegga cuntada, makhaayadaha, iyo hudheelada, wax soo saarka, iyo dahaarka kulaylinta iyo qaboojinta. BEI waa qayb ka mid ah Isbahaysiga Qaxoontiga Houston ee bixiyeyaasha adeegga qaxootiga kuwaas oo si shuraako ah u shaqaynayay 15kii sano ee la soo dhaafay. Iskaashatada wakaaladu waxay wadaagaysaa maalgelinta Gobolka sida RSS, TAG, iyo TAD si ay u bixiso adeegyo hufan oo dhamaystiran qaxootiga dib u dajinta Houston. 10kii sano ee la soo dhaafay, BEI waxay ahayd qandaraaslaha aasaasiga ah ee dhammaan Barnaamijyada Adeegyada Waxbarashada RSS waxayna leedahay waayo-aragnimo ballaaran oo xagga tababarka, la-talinta, iyo la socodka u hoggaansanaanta barnaamijka iyo maaliyadda si loo xaqiijiyo natiijooyinka guuleysta ee barnaamijyada iskaashiga.
Sannadkii 1988, BEI waxa ay ahayd mid ka mid ah dhawr dugsi oo gaar loo leeyahay oo Texas ku yaal oo ay oggolaatay Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyadaha Mareykanka si ay Ingiriisida iyo Cilmiga Bulshada u baraan soogalootiga cusub ee sharciyeysan ee helay cafiska agagaarka Houston. Sannadkii 1991, BEI waxay noqotay qandaraasle hoosaad wadaage leh Nidaamka Kulliyada Bulshada ee Houston oo bixisa ESL (heerarka 1, 2 & 3) oo ay maalgeliso Xeerka Qoraalka iyo Qoraalka Qaranka (NLA) ee 1991, PL 102-73. Sannadkii 1992, BEI waxa lagu abaalmariyay deeq wacyigelin ah Ololaha Guddoomiyaha ee ka dhanka ah Takoorka Shaqada, kaas oo BEI ay ka heshay aqoonsi heer sare ah Guddoomiyaha adeegyada la bixiyo. Laga soo bilaabo 1995 ilaa 1997, BEI waxay siisay arday, kuwaas oo intooda badan qaxooti ahaa, Tababarka Maamulka Xafiisyada Labada Luuqadood. Barnaamijka waxaa maalgeliyey JTPA Ciwaanka II-A, II-C/ Houston Works. 1996, BEI waxay deeq ka heshay TDHS, Xafiiska Socdaalka iyo Arimaha Qaxoontiga. BEI waxa ay u adeegaysay baahiyaha waxbarasho ee dadka qaxootiga ah ee ku nool Degmada Harris ilaa 1991, iyada oo sii marinaysa RSS, TAG, iyo deeqaha TAD ee TDHS, maanta waxa loo yaqaan HHSC.